Ogaden News Agency (ONA) – Trump & Kim Jong-Un oo Heshiis Kala Sixiixday.
Trump & Kim Jong-Un oo Heshiis Kala Sixiixday.
Madaxweynaha Maraykanka Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-Un ayaa wada saxiixdey heshiis kadib shir ay kuwada yeesheen dalka Singpore.
Heshiiska ay gaadheen labadan masuul, sida laga soo xigtay Trump, ayaa caddaynaya mid dhamaystiran waxana ay bilaabi doontaa hannaanka hub-ka-dhigista ee Nukliyeerka. Labada qodob ee heshiiska ugu muhimsan ayaa ah:
1. Maraykanka iyo DFK waxay gudagalayaan in la dhiso xidhiidhkooda cusub si waafaqsan rabitaanka dadka labada dal, nabad iyo barwaaqo.
Heshiiska labada dhinac ayaa ah is afgarad, waxaana uu u gogol xaarayaa wada hadal dheer oo labada dal wada galaan, kaas oo saameyn ku leh gacanka Kuuiryada. Trump oo saxaafadda la hadley ayaa sheegay in uu qorsheynayo in uu Kim Jong-Un ku casumo Aqalka Cad ee Maraykanka.